Khilaaf ka dhex aloosan Baarlanka Puntland & cidda ku lugta leh | Hadalsame Media
Home Wararka Khilaaf ka dhex aloosan Baarlanka Puntland & cidda ku lugta leh
Khilaaf ka dhex aloosan Baarlanka Puntland & cidda ku lugta leh
(Garoowe) 13 Luulyo 2021 – Muran ayaa ka taagan baarlamanka Puntalnd, kadib markii dhawaan la meel mariyay xeer hoosaadka baarlamanka kaasoo qodobbada qaarkood ay diideen xildhibaanada qaarkood, waxaana jira inay ku andacoonayaan in qodobbada qaarkood ay dastuurka ka hor imaanayaan.
“Lama rabo inta uu qofka guriga fariisto uu yiraahdo waa baarlamaanka soo maray , lacag baa halkaa iiga soo dhaceysaa taas shacabka Puntland ma aqbali karaan”
Wuxuu sheegay in haddii laga gudbi waayo khilaafkan ka dhashay ansixinta xeerkan in maxkamadda ay geyn doonaan si arrinta loo soo afjaro.
Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdikaxiin Dhoobo Daareed oo Nofembar 2019 xilka laga qaaday
Maxaa loogu baahday xeerkan?
Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa dhawaan BBC u sheegay in xeer hoosaadkan la doonayay in la waafajiyo xeer hoosaadyada hoose ee golaha wakiilada heer federaalka.
“Guddigii waxay soo jeediyeen in xeer hoosaadka golaha dowladda Puntland la waafiyo xeer hoosaadyada goleyaasha wakiilada heer federaal sida uu qabo 9-aad ee xasaanadda xubnaha golaha shacabka farqaddiisa shanaad waxay u dhigantahay marka xildhibaan laga qaadayo xasaanadda waa inay ogoladaan 2/3 tiradii guud ee xubnaha golaha shacbiga”
Bishii December ee sanadkii hore ayay aheyd markii baarlamaanka Puntland ay xasaanadda kala noqdeen 8 xildhibaan oo ay eedeyn usoo jeedisay xeer ilaalinta Puntland kuwaas oo lagu eedeeyay shuruucda baarlamaanka Puntland.
Sidoo kale bishii Nofeembar 2019, waxay xildhibaanada Puntland xilka ka xayuubiyeen guddoomiyihii baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo-daareed).
Madaxtooyada iyo Baarlamaanka
Khilaafkii xilka looga qaaday guddoomiye Dhoobo-Daareed ayaa la sheegay in uu ahaa mid u dhaxeeya baarlamaanka iyo madaxtooyada Puntland , sida uu BBC-da u sheegay Guddoomiyihii hore Dhoobo-Daareed oo BBC-da la hadlay bishii Nofeembar, 2019-kii.
Tan iyo xilligaasi, baarlamaanka iyo madaxtooyada waxaa loo arkay kuwa si wanaagsan u wada jaanqaadaya.
BBC-da markii ay weeydiisay guddoomiye Cabdirishiid in xeer hoosaadka cusub uu ka warhayo madaxweynaha, ayuu sheegay in xeer hoosaadyada baarlamaanka ay yihiin wax u gaar ah baarlamaanka, saxiixa ugu dambeeyana uu isaga leeyahay, isaga oo intaas ku daray in aysan jirin sabab madaxweynaha loogu wargaliyo.
Waxaa xusid mudan in marka xeer hoosaadka la ansixinayay uu madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ka maqnaa Puntland, isku day dhawr jeer ah oo aan samaynayayna aysan xukuumadda Puntland si toos ah uga hadlin arrinkan.
Previous articleITALY VS ENGLAND: Warbixin ku saabsan guushii xalay ee Talyaaniga oo markii 2-aad hantay Euro (Dhegeyso)
Next articleRuushka oo Safaaradda Maraykanka ku qabtay fal ”kharbudaad” (Muuqaal laga duubay min bilow ilaa dhamaad)